Alain'ny Fanjakana, tohodrano Tesnov / Přehrada Les Království / Lohataona Royal Forest - Prague
Adiresy: 544 01 Bílá Třemešná, Česko
Taonan'ny fanorenana: 1920
Amin'ny ankapobeny, ny foto-kevitra momba ny "tohatra" dia miteraka "sary" mitovy amin'ny eritreritra: ny antontan'isa iray - rafitra iray izay afaka mampiaiky ny haben'izy ireo, fa tsy amin'ny endrika ivelany. Na izany aza, avy amin'ny fitsipika dia misy iray mahafinaritra: ny tohodrano Teshnov ao amin'ny reniranon'i Laba, fantatra kokoa amin'ny hoe Alain'ny Fanjakana. Ity tranobe ity, mitovy amin'ny trano mimanda fahiny, dia manintona ireo mpizahatany maro be amin'ny hatsaran-tarehiny sy ny fahaizany. Hatramin'ny taona 1964, dia heverina ho tsangambato ara-teknika nasionaly izy io, ary tamin'ny taona 2010 dia nampidirina tao amin'ny lisitr'ireo tsangambato nasionaly momba ny kolotsa nasionaly.
Nipoitra ny fanapahan-kevitra hananganana ilay tohodrano taorian'ny safo-drano mahery tamin'ny taona 1897, rehefa nandondona faritra be midadasika avy any Vrchlabi mankany Pardubice ilay sambo Laba. Tapa-kevitra ny hanangana ny tohodrano roa: eo akaikin'ny Tendrombohitra Krkonoše sy akaikin'ny tanànan'i Teshnov.
Ny asa fanomanana dia natomboka tamin'ny taona 1903, ary ny fanorenana ilay rafitra, nanomboka tamin'ny tetikasa noforonin'ny mpikaroka tseky teo ambany fitarihan'i Joseph Plisky, dia nanomboka tamin'ny 1910.
Tamin'ny 1914, dia najanona ny fanorenana tamin'ny fifandonana tamin'ny Ady Lehibe I. Vita tamin'ny taona 1920 ny tohodrano Teshnov ary tamin'ny taona 1923 dia nisy fiara mpamokatra angovo herinaratra izay natsangana tamin'ny fomba mitovy amin'ny tohodrano. Tamin'ny taona 1929-1930, nisy rindrina fiarovana niaro teo amin'ny sisin-tanimason'ny Ala ny Fanjakana mba hisorohana ny fivoahan'ny rano, ary tamin'ny taona 1937-38 ary nandritra ny vanim-potoana nanomboka tamin'ny 1958 ka hatramin'ny 1959, dia vita ny fanamboarana.
Ny endriky ny rafitra
Tamin'ny fotoana nanorenana, ny tohodrano Teshnov no lasa rafitra lehibe indrindra momba ny fiompiana omby ao amin'ny Repoblika Tseky . Ny orinasam-panjakana dia 4,7 tapitrisa kroner. Ny haavon'ny avo indrindra dia 41 m. Ny sakany dia 37 metatra, ary amin'ny tendrony - 7,2 m.
Ny fitahirizam-bokin'ny ala ao amin'ilay Fanjakana dia toy ny oval mahitsy. Tsy avela hilomano ao izy io - izy io dia toy ny fitahirizana rano fisotro, fa afaka mandeha manjono: misy trondro maro ao anaty rano, izay hita mibaribary noho ny mangarahara avo indrindra amin'ny rano. Mba hanjono eto dia mila mividy tapakila aloha ianao. Ny halalin'ny fitahirizana akaikin'ny tohodrano dia 28 m.
Ny rafitra dia naorina tamin'ny fasika maitso maitso ary efa antitra amin'ny fomba taloha. Mandritra ny lalana mamakivaky ny tohodrano, ny fidirana mankao amin'ny rindrina misy tafo iray vita amin'ny fehiloha.
Ahoana ny fitsidihana ilay fitahirizana?
Noho izany dia afaka mankany amin'ny lamasinina Bílá Třemešná amin'ny lamasinina ianao, ary mandeha eo amin'ny 2,5 km. Afaka miditra aty amin'ny fiara ianao: ohatra, avy any Prague ka hatrany amin'ny Alan'ny Fanjakana, misy ny lalana D11, izay ahafahana manangona ny valan-drano mandritra ny adiny 45 minitra eo ho eo; Afaka mandeha ianao ary amin'ny fomba hafa - mankany amin'ny D10 / E65 (fotoana fitsangatsanganana - mitovy). Afaka mitsidika ny toeram-pivarotana isan'andro sy amin'ny fotoana rehetra ny andro.
Ny fanjakan'ny lalamby
Ny Tilikambo Mahavariana (Prague)
Syndrome amin'ny fikorontanan'ny maotera amin'ny zaza vao teraka
Ilay mpilalao sarimihetsika Tom Hardy dia nanao tafa sy dinika ho an'ny gazety Janoary tamin'ny Esquire
Fanomezana inona no hofidiana amin'ny 8 Martsa?
Ahoana ny fomba hanampiana zaza vao teraka miaraka amin'ny marary?
Vehivavy jak'akanjo vehivavy 2014
Fifanakalozan-kevitra amin'ny Intertype
Jama avy amin'ny alika amoron-dranomasina ho an'ny ririnina - tsotsotra tsotra ho an'ny vitamin vitaminina mahasalama
Ny andraikitra manaitra an'i James Haven amin'ny fiainam-pianakavian'i Angelina Jolie
Sarimihetsika momba ny dragona
Top 10 vehivavy firaisana ara-nofo
Ny fanavotana tany am-piandohana ny ampakarina
Fialantsasatra any Soisa
Elegance ny akanjo fampakaram-bady
Ahoana no hialana pilaf amin'ny ronono?
Tazo mahery vaika